Malunga nathi -Yancheng Tianzhihui Mat Co., Ltd.
Iqela leTianhui Int
Malunga neeMpahla zeMidlalo zeTianzhihui
IYancheng Tianzhihui Sporting Goods Co., Ltd. (Isifinyezo: Tianhui Sporting Goods) yinkampani edibanisa umzi mveliso kunye norhwebo. Ngokukodwa kuphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kweemveliso ezahlukeneyo zemidlalo kunye neemveliso izixhobo ukufaneleka. Sinesiseko semveliso yobugcisa sanamhlanje kunye nenkqubo epheleleyo kunye nesayensi yolawulo lomgangatho.
Yancheng Tianzhihui Sports Goods Co., Ltd. (ngaphambili Yancheng Tianzhihui Mat Co., Ltd.) yinkxaso ye China Tianhui Int Group. I-Tianzhihui Mat ifumene i-Tianhui Sports Goods Factory eDagang Town, kwiSithili saseYandu, esi sixeko ngoJuni 13, 2021. Emva kokugqitywa kokufunyanwa, kophuhliso olungcono, inkampani yathiywa igama: Yancheng Tianzhihui Sporting Goods Co., Ltd. ngaxeshanye, Ukulungiselela ukuhambisa ngcono ukuthunyelwa kwempahla kubathengi, simisele iindawo zokugcina iimpahla kwizixeko ezikufutshane nezibuko.
Ngoku iimveliso zethu zibandakanya kungekuphela nje imveliso yoqobo weTianzhihui mat: i-EVA floor mats, iimethi ezirhubuluzayo zabantwana, iikhaphethi, imethi yeyoga kunye nezinto zeyoga, kodwa nezixhobo zemidlalo kunye neempahla zemidlalo ezivela kwiTianhui Sports Goods Factory. Kwaye zonke iimveliso zidlulisile ukuqinisekiswa kwe-SGS, i-CE kunye neminye imibutho egunyazisiweyo.
Oko yasekwa, Tianhui Sports Iimpahla ebesoloko ngqo kwiinqobo ezingundoqo ukunyaniseka kunye nomgangatho. Ngomgangatho wemveliso ezinzileyo, iindidi zemveliso ezityebileyo, kunye neenkonzo ezinyanisekileyo nezobuchwephesha, siphumelele ukuthembela kunye nentlonipho yabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Ukuze libonelele ngcono iinkonzo zokuthengwa kwabahlobo bamanye amazwe, iqela liya kucwangcisa ukuseka inkampani yokulawula ukuthengiswa kwempahla kwixesha elizayo ukulungiselela iimfuno zokuthengwa kwabathengi!
Ixesha lokuzisa: Malunga neentsuku ezingama-30-40
Ixesha lokuzisa: Iintsuku ezi-5 ukuya kwezi-8 zoShishino
I-DHL: Ixesha lokuHanjiswa: kwiintsuku eziyi-3-5 zoShishino
UPS / kaFedEx / TNT /
I-EMS: Iintsuku ze-7-15 zoShishino.
Ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo kunye neenkonzo
Umphathi wentengiso wamanye amazwe: uTony
Iqela lase China Tianhui Int © Copyright - 2010-2021: Yancheng Tianzhihui Sporting Goods Co., Ltd. Imveliso eshushu, Imephu yendawo
I-Yoga Mat enetawuli ephezulu, iphazili yomthambo, Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle, Ingxowa yeYoga yokuHamba, Ingxowa yeYoga yeSling, Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba,